Forex အရောင်းခန်း - Forex Lens
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading Room တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုလေ့လာပါ
Pro Trader အသင်း ၀ င်ခြင်းဖြင့်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၆၅ အထိအပြည့်အဝရယူပါ
ရန် Listen Forex Lens On -Air
SIRIUS XM ရေဒီယိုတွင်ပါဝင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Discord နှင့် Forex Trading Room အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ် LIVE စီးဆင်းမှုများနှင့်အကျိုးအမြတ်ရှိသောကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များကိုအပြည့်အဝရယူပါ။
နေ့စဉ် တိုက်ရိုက် ရောင်းဝယ်ရေး အပိုင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex ရောင်းဝယ်ရေးအခန်းအတွင်းတွင်၊ သင်သည် မတူညီသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းညွှန်မှုပေးမည့် အကြီးတန်းနည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်သူများထံ သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Smart Money ဆန်းစစ်လေ့လာသူမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပါသည်။ တိုက်ရိုက် New York session အတွင်း နေ့တိုင်း နှင့် London session တွင် တစ်ပတ်လျှင် 2-4 ကြိမ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ Discord ဆာဗာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက် အပ်ဒိတ်အများဆုံးအချိန်ဇယားကို ကြည့်ရှုရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Discord အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အခါအားလျော်စွာ အခမဲ့နားနေခန်းအတွက် အခမဲ့စီးကြောင်းများကိုပင် လက်ခံကျင်းပပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုက်ရိုက်ဆက်ရှင်များအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး တိုက်ရိုက်ဆက်ရှင်ကို လွတ်သွားသော ကုန်သည်များအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်ရေနွေးငွေ့များတွင် ပါဝင်ရန် အချိန်မရှိသော ကုန်သည်များအတွက် အတိုချုံးနေ့စဉ် စျေးကွက်အကျဉ်းချုပ်များကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ထားပါသည်။
TA မေးခွန်းများရှိပါသလား။ ကောင်းတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများကိုလုံးဝနှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်လေ့လာနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုန်သည်များကိုတိုက်ရိုက်စီးဆင်းနေစဉ်နှင့် Discord chatrooms တွင်မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆိုင်သည်ကိုမဆိုမေးမြန်းနိုင်သည်။ သူတို့သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာရုန်းကန်မှုများနှင့်အတူကူညီရန်၊ သင်၏ဇယားများအပေါ်သင့်အားတုန့်ပြန်မှုပေးစေရန်နှင့်စျေးကွက်တွင်သူတို့မြင်တွေ့နေရသောအရာများအပေါ်သင့်အားကူညီပေးရန်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်သည်။
Forex Trading Room သည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းပါ။
အင်ဂျင်နီယာကုန်သည် သွန်သင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကိုရှာဖွေရန်ကုန်သည်များအတွက်နည်းစနစ်များ ကိုက်ညီမှု သူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်၌တည်၏။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအခန်းတွင်နာရီ ၁၀၀ ကျော်ကျော်သော Smart Money ပညာရေးဗီဒီယိုများကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုနောက်အဆင့်သို့တက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက Institute Trader ထက်စာသင်ကြားရန်ဆရာသည် သာ၍ ကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ကုန်သွယ်မှု Nut Podcast တွင်အိုင်တီလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။
Forex စျေးကွက်တွင် Smart Money ၏ခြေရာများကိုမည်သို့ခြေရာခံရန်နှင့်စျေးနှုန်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်နေသည်ကိုသင်လေ့လာပြီးပါက ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှု ခင်ဗျားစျေးကိုဘယ်လိုကြည့်တာလဲ၊ စျေးကွက်ကိုဘယ်လိုရောင်းတာလဲ”
- အင်ဂျင်နီယာကုန်သည်၊ အကြီးတန်းနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်သူ
SD Trader ကငါတို့ပဲ ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား သူ၏ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များအပေါ်ပျမ်းမျှစွန့်စားရမှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူး ၂.၈၃ အချိုးရှိကုန်သည် (ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှု) Supply နှင့် Demand ကုန်သွယ်မှုပုံစံကို အသုံးပြု၍ SD Trader သည် စွန့်စားခန်းငယ်နှင့် ဆုလာဘ်ကြီးကြီးမားမားကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ကုန်သွယ်မှုခန်းအတွင်း နှင့် Discord တွင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။
တစ်နေ့လျှင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ထက်မကသော Pro ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အရည်အချင်းကြောင့်သာမကမင်းကျောင်းသားတွေအပေါ်ထားတဲ့သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးသမားပဲ။ ” - အရောင်းအ ၀ ယ်အဖွဲ့ ၀ င် (2020)
" အတွေ့အကြုံကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်မည်သို့အားလုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှု။ အခွက်တဆယ်နှင့်ဗဟုသုတဝေမျှခြင်း၏ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှု။ ကောင်းပြီ။ အလုပ်လိုပဲ။ ယောက်ျားတွေကတက်ထားပါ! ” - အရောင်းအ ၀ ယ်အဖွဲ့ ၀ င် (2020)
"တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ တန်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အရောင်းအ၀ယ်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ တော်တော်လေး အသစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် crypto အတွက် စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ဗျူဟာကိုလည်း အသုံးပြုပြီး ၎င်းသည် အလွန်ထိရောက်သည်။ ငါအလွန်အကြံပြုလိုတယ်။ Forex Lens ရုံကုန်သွယ်သို့စတင်တဲ့မည်သူမဆိုရန်။ အခုသူတို့မှာအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးစိတ်တိုးပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သည်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ ငါကသူတို့ကိုငါ့အောင်မြင်မှုအများကြီးဂုဏ်ပြု! ” - အရောင်းအ ၀ ယ်အဖွဲ့ ၀ င် (2020)
ကျွန်တော်အဆင့်မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး Forex Lens အလုံအလောက်မြင့်မားသော! Brilliant ၀ န်ဆောင်မှု၊ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက၊ အကြံဥာဏ်များရယူပါကအမြဲတမ်းထိုနေရာတွင်ရှိနေသည်။ စျေးကွက်၏ကြီးစွာသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ! ကျိန်းသေဤမျှလောက်ပိုပြီးအသိပညာအကူအညီနဲ့အကြံဥာဏ်ကိုအောက်ပါ။ ဗဟုသုတပိုမိုလိုချင်။ Forex တွင်ကုန်သည်ဖြစ်လိုသူမည်သူမဆိုအားအကြံပြုလိမ့်မည်။ ” - အရောင်းအ ၀ ယ်အဖွဲ့ ၀ င် (2021)
အကယ်၍ သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးကိုအလေးအနက်ထားပြီးပညာရှင်များလိုပဲကုန်သွယ်ရန်စီစဉ်နေလျှင်၊ Forex Trading Room ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ” - အရောင်းအ ၀ ယ်အဖွဲ့ ၀ င် (2019)
ငါရှာတွေ့ပြီ Forex Lens လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံး forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကရှစ်ယောက်၊ ၉ ယောက်ကိုငါကြိုးစားခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ လောက်အကုန်အကျခံခဲ့တယ်။ “ -အရောင်းအ ၀ ယ်အဖွဲ့ ၀ င် (2018)
နေ့တိုင်းကုန်သွယ်ရေး (များ) ဖြင့်စျေးကွက်များသို့သွားသောတိုက်ရိုက်အစီအစဉ်များကိုနေ့တိုင်းပြုလုပ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များကို Entry စျေးနှုန်း၊ Stop Loss နှင့် Take Profit ပစ်မှတ်များအားဇယားနှင့်အချိန်ဇယားဖြင့်မျှဝေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုနည်းစနစ်များကိုသင်လေ့လာရန်ကူညီမည့်အကြောင်းအရာဗီဒီယိုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကျော်ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဒီနေ့ Pro ကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Discord Community သို့ဆက်သွယ်ပါ
Smart Money Trading ပညာရေး
Forex တွင်အကောင်းဆုံး Ichimoku ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာ